> Resource > Mac > Sida loo Read iPhone kaabta on Mac
Marka iPhone xiran yahay aad Mac markii ugu horeysay, gurmad Lugood ah si toos ah la abuuri doono Mac ah. Users badan oo weydii tan iyo markii uu jiro gurmad Lugood ah ee Mac, waa hab ay ku akhriyaan on Mac? Dhab ahaantii tani gurmad Lugood waa file a database SQLite. Sida aynu wada ognahay, ay sabab u tahay siyaasadda gaarka ah ee Apple, file tani ma aha in qaab akhrin karo. Waxaad awoodi kartaa helitaanka midna akhriyey straightly aad Mac.
Si aad u akhriso gurmad iPhone straightly on Mac, waxaad qaadan kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) sida isku day ah (ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ). Tani gurmad iPhone shawladda si fudud u soo saaro karo files kaga imaanayo Lugood iyo waxay fududaysaa in aad aqriso gurmad iPhone straightly. Hadda waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka in ay kor u akhriyo 11 faylasha nooc ka iPhone gurmad on Mac, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, xiriirada, fariimaha, wac taariikhda, Bookmarks Safari, qoraalo, jadwalka taariikhda, iwm
Sidaa daraadeed, ma aha oo kaliya in aad ka akhrisan kartaa iPhone gurmad on Mac, laakiin sidoo kale ka akhrisan files raad raac ah oo iPad iyo iPod xiriiri on Mac aad.
Waxaad kala soo bixi kartaa version jirrabaadda kuwa aan Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) in la akhriyo iPhone gurmad si toos ah Mac hadda. (Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa la jaan qaada labada Windows iyo OS Mac.)
Read iPhone kaabta on Mac in 4 Talaabooyinka
Tallaabada 1. Ka dib markii ay ku rakibidda Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) on your computer, waxaad u baahan tahay in ay doortaan "kabsado Lugood gurmad" dusheeda ee suuqa ugu weyn. Markaas Lugood dhammaan faylasha raad raac ah oo qalab aad lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Dooro mid ka mid ah u qalab aad iyo guji "Scan" Macdan waxyaabaha ka.
Tallaabada 2. Marka scan ay ka badan tahay, waxyaabaha gudaha gurmad Lugood loo qaybaha sida "Farriin", "Xiriirada", "Video", "Call History", iwm qoran doonaa
Markaas waxaad riixi kartaa files mid mid ay ku akhriyaan gurmad iPhone aad Mac.
1. Waxaad isticmaali kartaa version maxkamad lagu soo saaro gurmad Lugood iyo iyaga ku eegaan. Haddii aad rabto in aad si ay u sii on your Mac, waxaad u baahan tahay inaad iibsato nooca buuxda ee Dr.Fone.
2. Marka laga reebo ka akhriska gurmad iPhone on Mac, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) waa sida barnaamij soo kabashada xogta xiriiri iPhone / iPad / iPod. Waa awood aad ka bogsato xogta labada gurmad Lugood ama si toos ah uga iPhone 3GS / 4 / 4s / 5, iPads oo dhan iyo iPod taaban 4/5.